Dowladda Soomaaliya oo gargaar u dirtay Shabeellaha Hoose iyo Baay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Dowladda Soomaaliya oo gargaar u dirtay Shabeellaha Hoose iyo Baay
Muqdisho – Mareeg.com: Dowladda Soomaaliya ayaa maanta shaaca ka qaaday in kaalmadii ugu horreysay dowladdu u dirtay qaar ka mid ah degmooyinka Alshabaab laga saaray ee ku yaalla Baay iyo Shabeellaha Hoose.
Wasiir ku xigeenka warfaafinta Soomaaliya, C/llaahi Colaad Rooble oo maanta warbaahinta kula hadlay Mqudisho kadib markii uu dhamaaday shirkii caadiga ahaa ee golaha wasiirrada ayaa sheegay in dowladdu kaalmo raashin ah u dirtay degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellaha Hoose iyo degmooyinka Buurhakabo iyo Baydhabo ee gobolka Baay.
Wasiir ku xigeenka ayaa sheegay in gaadiidka sida cunaddaas ay goor hore ka baxeen Muqdisho, uuna rajenayo iney maanta gaaraan degmooyinka loo qorsheeyey.
C/llahi Colaad Rooble ayaa tilmaamay in kaalmadani aysan ku ekaan doonin 3-da degmo ee maanta loo diray, hase ahaatee maalmaha soo socda kaalmo nuucaan ah la gaarsiin doono degmooyin kale oo ka mid ah kuwa laga qabsaday Alshabaab.
Dowladda Soomaaliya iyo Qaramada Midoobaya ayaa horay u ballan qaaday in kaalmo deg deg ah la gaarsiin doono deegaanada ciidamada huwanta ah ka saaraan Alshabaab.